Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Heshiiskii Dalxiiska Labada Dal ee Hindiya iyo Jarmalka oo La Saxiixay
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Hindiya iyo Jarmalka heshiiskii dalxiiska ee laba geesoodka ahaa ayaa la kala saxiixday
Hindiya iyo Jarmalku waxay kala saxeexdeen heshiis dalxiis oo laba geesood ah iyada oo loo sii marinayo Ururka Dalxiisayaasha Hindiya (IATO) iyo Deutscher Reiseverband eV, (DRV) Ururka Socdaalka Jarmalka si kor loogu qaado dalxiiska labada dhinac ee labada dal iyada oo la qaadayo tallaabooyin habboon oo dib loogu soo celinayo dalxiiska markey xaaladdu noqoto waa caadi, ayuu yiri Mudane Rajiv Mehra Madaxweynaha IATO.
IATO iyo DRV waxay ku heshiiyeen inay qaadaan dadaallo macquul ah si xubnahooda loogu wargeliyo xubinnimada labada urur, dheeftiisa, iyo dhacdooyinka Hindiya iyo Jarmalka.
Labada ururba waxay sidoo kale qaban doonaan barnaamij isweydaarsiga safarka iyo barnaamijka tababarka si is -dhaafsi ah.
Saxiixa heshiiskan ayaa sidoo kale farriin u diraya dalalka kale ee Yurub in Hindiya ay diyaar u tahay inay soo dhoweyso dhammaan dalxiisayaasha ajnabiga ah.
Heshiis iskaashi oo is -dhaafsi ah ayaa waxaa saxiixay Mr. Norbert Fiebig, Madaxweynaha - Deutscher Reiseverband eV, Ururka Socdaalka Jarmalka, iyo Mudane Rajiv Mehra, Madaxweynaha, Ururka Shaqaalaha Dalxiisayaasha Hindiya, si arrintan loo sii ambaqaado.
Heshiiskan, IATO iyo DRV labaduba waxay ku heshiiyeen inay qaadaan dadaallo macquul ah si xubnahooda loo ogeysiiyo xubinnimada labada urur, faa'iidadiisa, iyo dhacdooyinka gudaha Hindiya iyo Jarmalka. Mas'uuliyiinta labada urur ayaa lagu casuumi doonaa shirarkooda sanadlaha ah waxayna qaban doonaan barnaamij isdhaafsi safar iyo barnaamij tababar oo ku dhisan isdhaafsi.
Jarmalku waa mid ka mid ah suuqyada waaweyn ee laga helo dalxiiska gudaha Hindiya, tanina waxay gacan ka geysan doontaa dib u soo nooleynta dalxiiska gudaha Hindiya waxayna gacan ka geysan doontaa hawlwadeennada dalxiiska ee ka socda Jarmalka inay dib u soo celiyaan iibinta baakadaha Hindiya.
Heshiiska ay wada saxiixdeen DRV iyo IATO kaliya ma furi doono albaabada Xubnaha IATO inay ku xidhmaan xubnaha DRV laakiin waxay sidoo kale farriin u diri doontaa waddamada kale ee Yurub in Hindiya ay diyaar u tahay inay soo dhoweyso dhammaan dalxiisayaasha shisheeye mar haddii Fiisooyinka E-Dalxiiska iyo duullimaadyada caalamiga ah dib loo bilaabo.
Hindiya iyo Jarmalka ayaa taariikh dheer wada leh. Hindiya waxay ahayd qayb ka mid ah Boqortooyada Ingiriiska intii lagu jiray WWI, waqtigaasna, Ciidanka Hindiya ee Ingiriiska ayaa lagu amray inay askar ku biiriyaan dadaallada dagaalka ee xulafada, oo ay ku jiraan Jabhadda Galbeedka. Dadka u ololeeya madaxbannaanida gudaha ciidammada gumaysigu waxay raadinayeen kaalmo Jarmal ah si ay u helaan xorriyadda Hindiya, taas oo dhalisay Shirqoolkii Hindu-Jarmal intii lagu jiray Dagaalkii Koowaad ee Adduunka.
Jamhuuriyadda cusub ee la aasaasay ee Hindiya waxay ka mid ahayd waddammadii ugu horreeyay ee soo afjaray Dawladdii Dagaal ee Jarmalka kadib Dagaalkii Labaad ee Adduunka mana aysan sheegan magdhaw dagaal oo ka yimid Jarmalka in kasta oo 24,000 oo askari oo ka tirsanaa Ciidanka Hindida Ingiriiska ay ku dhinteen ololihii lagula dagaallamay Nazi Jarmalka .
Hindiya waxay xiriirkii diblomaasiyadeed la lahayd Galbeedka Jarmalka iyo Bariga Jarmalka waxayna taageertay dib u midoobiddoodii 1990 -kii.
Hogaamiyaha Jarmalka Merkel iyo Raiisul Wasaaraha India Modi
Waqti aad u casrisan, Chancellor -ka Jarmalka Angela Merkel ayaa booqashooyin badan oo rasmi ah ku tagtay Hindiya taasoo horseeday in la saxiixo heshiisyo dhowr ah oo ballaarinaya iskaashiga laba geesoodka ah, kii ugu dambeeyayna wuxuu ahaa bishii Nofembar ee 2019 markii 17 heshiis ay kala saxiixdeen Hindiya iyo Jarmalka.